Light Box ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် China DC12V Super Light LED တင်းတင်းဘား - DiGuang
LED မီး Box ကိုအလင်းရောင်
LED Signage အလင်းရောင်
LED module တစ်ခု
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED ကြိုး
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > LED မီး Box ကိုအလင်းရောင် > တင်းကျပ်ဘား LED > အလင်းသေတ္တာများအတွက် DC12V စူပါအလင်း LED တင်းကျပ်ဘား
Backlit Billboard အတွက် IP65 ကုလားကာ LED မီးခွက်
IP65 သည် LED မီးအလင်းတွင်မှန်ဘီလူးဖြင့်တင်းကျပ်သောဘားကိုထွန်းသည်
အလင်းသေတ္တာများအတွက် DC12V စူပါအလင်း LED တင်းကျပ်ဘား
အလင်းသေတ္တာများအတွက် SMD2835 12V LED မာကျောဘား
အလင်းသေတ္တာအတွက် DC12V super light LED တောင့်တင်းဘားသည်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးထည့်သွင်းထားသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောနောက်ကျောမီးအလင်းရောင်အဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ 120 ဒီဂရီရောင်ခြည်ထောင့်, ပျော့ပျောင်းသောillumရိယာနှင့်ယူနီဖောင်း illumination ပေး။ SMD2835 LED ချစ်ပ်များသည်အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအရောင်များနှင့်အတူ။ ၃.၅ မီလီမီတာအကျယ်သည်ပိုမိုပါးလွှာသောကြော်ငြာအလင်းတန်းအတွက်ကောင်းမွန်စေသည်။
အလင်းသေတ္တာများအတွက် DC12V Super Light LED မာကျောသောဘား
အလင်းသေတ္တာများအတွက် DC12V စူပါအလင်း LED တင်းကျပ်ဘားစတော့ရှယ်ယာများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုကို။ အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများနှင့်သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်အရှည်။ ၆၀% သောစွမ်းအင်ချွေတာမှုသည်ရိုးရာမီးချောင်းမီးခွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်မှုကိုပိုခံသည်။ CE / RoHS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမ ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တရုတ်နိုင်ငံ၌သင်၏ရေရှည် LED မာကျောသော bar ပေးသွင်းသူဖြစ်လာမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
စိတ်ကြိုက် 60pcs SMD2835 LED
24-26 lm / LED
12000 - 14000K, စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
1010 x3.5 x ကို 1.6
-25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
1. SMD2835 LED chip, ပိုပြီးယူနီဖောင်း;
2. DC12V အလင်းရောင်သေတ္တာအတွက်အလင်းရောင်တောင့်တင်းသောဘားသည်နောက်မကျဘဲမီးထွန်းသည်။
ကောင်းမွန်သောအပူနစ်မြုပ်မှုအတွက် ၃.၆ မီလီမီတာအလူမီနီယံ PCB;
၄။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ မြင့်မားသောတောက်ပမှုနှင့်သက်တမ်း ၂ နှစ်သက်တမ်းရှိသည်။
ပါးလွှာသောအလင်းလမ်းညွှန်ပြားအတွက် ၆။ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
1.2- 20cm အထူနောက်ကျော -lit ကြော်ငြာအလင်း box ကို;
၂။ ဘေးဘက်မီးအလင်းရောင်၊ အချက်ပြမီး၊ လေဆိပ်၊ မြေအောက်ရထားဘူတာ၊
ဟုတ်ပါတယ်။ နမူနာတစ်ခုသို့မဟုတ်ရောနှောထားသောအမျိုးအစားများကိုသင်ပို့ပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
၂။ LED ထုတ်ကုန်များအတွက်မည်သည့် LED Chips များကိုသင်အသုံးပြုလေ့ရှိသနည်း။
မြင့်မားသောပါဝါ LED ကိုတင်းကျပ်စွာချွတ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Osram, Epistar နှင့် Sanan LEDs ကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်၏ logo ကို led light ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် print ထုတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုမပြုမီတရားဝင်အသိပေးအကြောင်းကြားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာအပေါ် အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုပါ။
Light Box အတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏စာစောင်သို့မဟုတ် light box အရွယ်အစားကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းများသို့အကြံပေးပါ။ သူတို့သည် ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အား illuminated နိမိတ်လက္ခဏာများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေကိုပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
Diguang LED နှင့်၎င်း၏ပစ္စည်းများ၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း။
Diguang LED သည်အလင်းသေတ္တာအတွက် DC12V စူပါအလင်း LED တင်းတင်းဘားအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖောက်သည်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးအများစုမှာဥရောပ၊ မြောက်အမေရိက၊ အာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်တည်ရှိသည်။ Light Box LED မီးအလင်းတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောတရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ စျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေး၊
IP65 တင်းတင်း LED Strip Light ဘား
SMD3030 Super Thin LED တင်းကျပ်သောအလင်းရောင်
Backlight Advertising Box အတွက် 10W LED Ridig ကြိုး
Advertising Box အတွက် High Brightness Solid LED Strip
Ultra Slim တင်းကျပ်သော LED ဘားများသည်အလှဆင်ခြင်းအတွက် Super Bright
: JingHe စက်မှုဥယျာဉ်၊ အမှတ် ၁၃၈ Santun စက်မှုလမ်း၊ Houjie မြို့၊ Dongguan, Guangdong, China
Edge lit Lighting, Backlight Lighting, LED Rigid Bar သို့မဟုတ် pricelist နှင့်ပတ်သက်သောမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
11/5000 LED light သည်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုမလင်းပါ
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့ ဦး ဆောင်သောမီးခွက်၏ဖြစ်စဉ်ကိုမကြည့်ပါ၊ အလင်းရောင်မရှိသည့်ပုတီးလုံးသို့မဟုတ်မီးလုံးအားလုံးသည်မလင်းပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကိစ္စနှစ်ခုလုံးတွင်အလင်းပုတီး၏ပြproblemနာဖြစ်ပါကအကြောင်းအရင်းမှာကွဲပြားပါသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မီးပုတီးအရည်အသွေးမကောင်းတဲ့, အလင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာရှည်လျားလောင်လိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်လုပ်နိုင်တဲ့အစားထိုးဖို့သက်ဆိုင်ရာဆီမီးခွက်ပုတီးကိုဝယ်ယူရန်သာလိုအပ်သည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Dongguan Diguang Lighting Technology Co. , Ltd - Edge-lit Lighting - အားလုံးညာဘက်ထိန်းသိမ်းထားသည်